Football Khabar » कोपा अमेरिका : क्वार्टरफाइनलमा अर्जेन्टिनाको प्रतिस्पर्धी को ?
कोपा अमेरिका : क्वार्टरफाइनलमा अर्जेन्टिनाको प्रतिस्पर्धी को ?
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना क्वार्टरफाइनल प्रवेश गरेको छ । गत राति भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिनाले कतारलाई २–० ले हराउँदै अन्तिम आठमा स्थान सुरक्षित गरेको हो ।
अर्जेन्टिनालाई जिताउन लोटारो मार्टिन्ज र सर्जियो अगुएरोले १–१ गोल गरे । सो जितसँगै अर्जेन्टिना समूह ‘बी’बाट समूह उपविजेता बनेर ४ अंकसहित अन्तिम आठमा पुग्दा ३ वटै खेल जितेको कोलम्बिया ९ अंकसहित समूह विजेता बनेर अन्तिम आठमा पुग्न सफल भयो ।
यससँगै अब लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिनाले अन्तिम आठमा भेनेज्वेलाको सामना गर्ने भएको छ । उसले सेमिफाइनल पुग्न भेनेज्वेलालाई पन्छाउनुपर्ने हुन्छ ।
भेनेज्वेला त्यही टिम हो, जसले केही समयअघि स्पेनमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिनालाई ३–१ को नमिठो हार चखाएको थियो । त्यसपछि यी दुई टिम पुनः अफिसियल प्रतियोगितामा भिड्न लागेका हुन् ।
यसपटक अर्जेन्टिनाले स्पेनमा भेनेज्वेलासँग भोगेको नमिठो हारको बदला कोपाको नकआउट चरणमा हराएर मिठो बदला लिने अवसर ऊसँग छ ।
प्रकाशित मिति ९ असार २०७६, सोमबार ०३:३८